dhamma Videos - Page 185
Dr.Soe Lwin, Vipassana Class in S'pore: 05/07/2015(Day-2) Part-3
by Admin Added2years ago 1,619 Views /2Likes
Dr U Soe Lwin (Mandalay) Dhatu Vibhanga Sutta, part 1, (Myanmarnet.net)
Dr U Soe Lwin: "Prominent Vision" Tayardaw, Part A; 10-04-2011 (Myanmarnet.net)
Dr U Soe Lwin (Mandalay): "The Four Noble Truths" on 8th April 2011 (PM) (Myanmarnet.net)
"အဆန်လမ်း" အတ္တ၊ အနတ္တ၊ နှင့် နယ်၃နယ်၊၊ အပိုင်း (ဃ) ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး);
ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး) "အဆန်လမ်း" အတ္တ၊ အနတ္တ၊ နှင့် နယ်၃နယ်၊၊ အပိုင်း (ဃ) Dr Soe Lwin (Mandalay)
အဆန်လမ်း" အတ္တ၊ အနတ္တ၊ နှင့် နယ်၃နယ်၊ (B)
ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး) "အဆန်လမ်း" အတ္တ၊ အနတ္တ၊ နှင့် နယ်၃နယ်၊၊ အပိုင်း (B) on 12-04-2012 (MyanmarNet.Net) http://www.thisismyanmar.com/mb/dhamma/lay-people/dr-soe-lwin/up-stream.pdf
အဆန်လမ်း - အပိုင်း - (4), အာရုံ (အာရမ္မဏ) (A) - ဒေါက်တာ ဦးစိုးလွင် (မန္တလေး)
အဆန်လမ်း - အပိုင်း - (4), အာရုံ (အာရမ္မဏ) (A) ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး) Dr U Soe Lwin (Mandalay): The Upstream Path, Part 4: Aramana (A), (MyanmarNet.Net)
Vipassana Meditation (in English) 5/28 by Chanmyay Sayadaw gyi Ashin Janaka bhivamsa
Vipassana Meditation (in English) 5/28 by Chanmyay Sayadaw gyi Ashin Janaka bhivamsa Chanmyay Yeiktha, Yangon ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (Myanmarnet.net Dhamma Videos)
Dr U Soe Lwin: "Mind and Sense Object" Tayardaw, part B; 9-04-2011 (Myanmarnet.net)
Dr U Soe Lwin Prominent Smell Tayardaw, Part B Myanmarnet net YouTube
အဆန်လမ်း အပိုင်း - က, သတိ (A)
ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး); အဆန်လမ်း အပိုင်း - က, သတိ (A) Tayardaw Thingyan Period 2012 (MyanmarNet.Net) http://www.thisismyanmar.com/mb/dhamma/lay-people/dr-soe-lwin/up-stream.pdf
Introduction To Vipassana - Part2of 3(English)
In this video, Rev. Goenkaji introduces the technique of Vipassana inasimple, short discourse. He clarifies many doubts and explains what the technique actually is, and how it can help you. He details the history of the technique and also explains what
ခံရခြင်းးစံရခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း - ဒေါက်တာ ဦးစိုးလွင် (မန္တလေး)
ခံရခြင်းးစံရခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း (03-03-2012) Dr U Soe Lwin (Mandalay): "Freedom from Dukkha and Sukha" Tayardaw
အဆန်လမ်း - ဥပါဒါန အပိုင်း - (C) - ဒေါက်တာ ဦးစိုးလွင် (မန္တလေး)
အဆန်လမ်း - ဥပါဒါန အပိုင်း - (C) ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး) Dr U Soe Lwin (Mandalay) Part 3: Upadana C (MyanmarNet.Net) Link to the Book: http://www.thisismyanmar.com/mb/dhamma/lay-people/dr-soe-lwin/up-stream.pdf
အဆန်လမ်း - အပိုင်း - (4), အာရုံ (အာရမ္မဏ) (D) - ဒေါက်တာ ဦးစိုးလွင် (မန္တလေး)
အဆန်လမ်း - အပိုင်း - (4), အာရုံ (အာရမ္မဏ) (D) ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး) by Dr U Soe Lwin (Mandalay): The Upstream Path,
သတိ (သို့) စောင့်ရှောက်ခြင်းကိစ္စ - ဒေါက်တာ ဦးစိုးလွင် (မန္တလေး)
သတိ (သို့) စောင့်ရှောက်ခြင်းကိစ္စ ဒေါက်တာဦးစိုးလွင် (မန္တလေး) Dr U Soe Lwin: "Awareness and Looking After"
Oxford Buddha Vihara (UK, Singapore, Malaysia & Yangon) များ ၏ နာယကဆရာတော် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ Venerable Prof. Dr. Khammai Dhammasami MA, AM, MPhil (BPU & Kelanaiya), DPhil (Oxford) အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ သာသနပါလဓမ္မာစရ
အနတ္တလက္ခဏသုတ် (၁) တရားတော် 1/2 - Dr Soe Lwin (Mandalay)
ဒေါက်တာစိုးလွင် မန္တလေး ဆွေးနွေးဟောပြောသော အနတ္တလက္ခဏသုတ် (၁) တရားတော် 1/2, 19 - February - 2011 Mandalay , Dr Soe Lwin (Mandalay)
ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ကိုယ်သာခံ တရားတော် - ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ကိုယ်သာခံ တရားတော် - ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ Kyarnikan Sayadaw U Jadila (MyanmarNet Dhamma Videos) (မြန်မာနက်)
© 2018 Dhamma Video. All rights reserved